Qoraaladii ugu dambeeyay - Muuqaalka Cradle
Komi Shouko waa jilaha ugu muhiimsan ee Anime Komi ee caanka ah ma wada xiriiri karo. Laakiin waxaa jira wax la yaab leh oo iyada ku saabsan. Ma hadli karto. Xataa hal eray ma odhan karto. Haddaba waa ayo Komi Shouko? Iyo doorka ay ka ciyaareyso Anime-ka. Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dabeecadeeda iyo doorkeeda Anime-ka. Hoos ka dhagayso codka maqalka ah ee maqaalkan: Muuqashada qaybtii 1aad ee Komi Can't Communicate oo ay ku sheegayso in qofka welwelka ba'an qaba ay mararka qaar ku adkaato in uu la hadlo dad cusub. Komi ayaa bilaabay […]
Classroom Of The Elite Anime waxa uu ahaa Anime caan ah oo asal ahaan soo baxay 12th Luulyo 2017. Anime-ku waxa uu ku salaysan yahay mangaga isla magaca kaas oo soo baxay horaantii 2016, gudaha Warshada Warshada Majaajilada Billaha ah ee Majaajilada. Anime-ka si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay waxayna mar horeba ka hadlayeen Fasalka Xiliga Elite 2 maadaama aan waligeed ku sii dhawaanayno 2022. La tali inay jiraan qaswadayaal Qaybta u dambaysa ee Anime ee soo socota. Dulmar - Fasalka Elite-ka ee la Sharaxay Anime wuxuu ku bilaabmaa hal-ku-dhig yar oo ka socda MC Kiyotaka halkaas oo uu sheegay in […]
Habka Husband-ka waa Qayb Nolosha Anime ah oo asal ahaan soo baxday Abriil 8, 2021. Waa laqabsiga Manga ee isku magaca ah, kaas oo aad loo jecel yahay, sida Anime-ka. Waxay raacdaa nin la yiraahdo Tatsu, kaas oo, ka dib nolol dheer oo dembi ah, wuxuu go'aansaday inuu u yeero joojinta oo uu nolol xasilloon kula noolaado lammaanihiisa. Habka Husband Season 3 waa wax ay taageerayaashu rajeynayaan. Markaa ma dhici doontaa? Dulmar - Habka Ninka Guriga u ah Qodobka ugu muhiimsan ee sheekadu waa in Tatsu uu sii wado helitaanka [...]
Weligay ma maqal wax la mid ah. Kuwani waa waxa aad dhihi karto ka dib markaad maqasho Weerarkii Titan Season 3 oo dhammaanaya. Waxay ahayd si fudud la yaab leh, iyo dabcan, waa furitaanka ugu wanaagsan ee aan arkay ilaa hadda marka la barbar dhigo kuwa kale oo dhan. Dulmar - Weerarkii Titan ee soo afjarmaya Hoos waxaa ah furitaanka oo aad daawan karto si aad si fiican u fahanto waxa aan ka hadlayo haddii aadan horay u maqal furitaanka asalka ah. Sida aan hore ugu soo sheegay maqaaladii hore qaar ka mid ah furitaanka Anime iyo dhawaaqyada dhawaaqa gaar ahaan mararka qaarkood si ay u midoobaan waxay ku dhow yihiin inay dareemaan heeso halkii ay ka heli lahaayeen heesaha. […]
Kaguya Sama waa Anime jaceyl ah oo la jecel yahay oo asal ahaan soo baxay 2019. Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa wax walba oo ku lug leh Kaguya Sama Season 3. Kaguya Sama waxay haysataa sheeko xiiso badan oo lagu bilaabayo laakiin xilli ciyaareedkii labaad ayaa bilaabay inuu istaago iyo tan saamaynta marka la eego sida sheekada ugu weyn iyo qaybaha kala duwan ay isu dhigmaan. Sheekadu waxay ku saabsan tahay ilaa 2 arday oo kan kale jecel laakiin aad uga baqaya inay midba midka kale u qirto. Dulmar guud Kaguya Sama Love Is War sheekadeedu aad bay u toosan tahay oo way fududahay, in la sheego ugu yaraan. […]
Qof degan Zhenjiang, Gobolka Jiangsu ayaa loo diray isbitaalka Abriil 28-keedii ka dibna waxaa laga helay H10N3 Maajo 28-keedii. Xogtan waxaa bixiyay komishanka caafimaadka Si kastaba ha ahaatee, guddiga ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sida ninkaasi uu ku dhacay. Xaaladiisa caafimaad hadda waa ay degan tahay, waxaana uu ku guda jiraa sidii looga saari lahaa. Baadhitaan tifaftiran oo degdeg ah oo ay ku lug leeyihiin dadka ay isku dhow yihiin, saaxiibadiisa, iyo qoysku ma helin kiisas kale, ayay NHC sheegtay. Ma jiro kiisas kale oo ah infekshanka aadanaha ee H10N3 oo laga soo sheegay gobolka, ama caalamka, ayay raacisay. Maxay tani uga dhigan tahay […]
Hajimete no Gal waa Anime nooca Echhi aad loo jecel yahay. Waxay caan noqotay markii dib loo sii daayay 2017. Anime-ka ayaa si aad ah loo soo dhaweeyay wuxuuna ahaa taageere ay jecel yihiin dad badan. Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonaa sababta Xaajimete no Gal Season 2 ay u badan tahay, iyo waqtiga la sii deyn doono. Manga ee Anime-kan wali waa la qorayaa mana muujinayo wax calaamad ah oo gaabinaya, iyadoo daabacaadda manga cusub la sii daayay horraanta 2021. Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa sababta ay tani muhiim u tahay iyo waxa ay uga dhigan tahay Hajimete [ …]
WAA LAGU TALIYAA: Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay qoraal garaaf ah oo laga yaabo in aanu ku haboonayn da' kasta. Isku soo wada duuboo AOT waa cabsi ku filan - dad-cunayaal waaweyn oo bini'aadminimo ah oo loo yaqaan Titans kuwaas oo dantooda kaliya ay tahay in ay liqaan bini'aadamka - waa riyo bilawga ah. Haddaba sidee bay tixdani u eegi kartaa burburka iyo ka sii muhiimsan falcelinta shaqsiga ah iyo dhibka jilayaasha taxanaha ah? Taasi waa waxa aan ku furfuri doono maqaalkan ee fadlan naftaadu is raaxayso marka aynu dhex galno aduunka dhiigu ku daatay ee derbiyada ka baxsan. Qaybtii furitaanka Aan ku bilowno bilowga Qaybtii, halkaas oo daankaygu ka dhacay […]
Haddii aad dhammaysay daawashada sheekada cajiibka ah ee u dhaxaysa Kazuya iyo Chizuru markaas waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad akhrido Manga ee isha asalka ah. Dad badan ayaa tan u jeesta marka ay dhammeeyaan Anime sababtoo ah waxay rabaan inay arkaan sida ay u barbar dhigaan asalka. Markaa maqaalkan, waxaanu ku tusinaynaa meesha ugu fiican ee aad ku akhrido Manga-ga-saaxiibka ah ee kirada. AFEEF: Cradle View [rasmiga ah cradleview.net] ma jirto sheegasho xiriir la leh mid ka mid ah xiriirada hoos lagu bixiyo. Xidhiidhinta boggaga ka baxsan Cradle View oo aan ku xidhnayn cradleview.net waxa loo soo bandhigay ujeeddooyin waxbarasho oo keliya oo ha ku boorrinin […]
AFEEF: LA TALIYAHA WAXA KA QABSAN QAAB AAD U WEYN Demi Rose Mawby, oo ah qof si guul leh caan uga ah England 8-dii Oktoobar ayaa soo galisay qoraal kale oo Instagram ah markan Tulum, Mexico, si ay u soo bandhigto jirkeeda cajiibka ah. Waxay si buuxda u qaawan tahay, oo dib u tusinaysa kamarada. Demi Rose Mawby Sawirrada aan sareyn waa shay la jecel yahay oo ka mid ah sawirada Instagram-ka ee Demi ee aan u malaynayno. Ka eeg qoraalkan Instagram Qoraal ay wadaagto Demi Rose (@demirose) Fiidiyowga ayaa si cad u muujinaya Demi Rose Mawby oo eegaysa badda, iyadoo eegaysa qorrax dhaca. Demi Rose Mawby waxay samaysay qoraallo badan oo la mid ah Instagram iyo inay sii joogto […]
Komi Can't Communicate waa laqabsiga cusub ee Anime ee Manga caanka ah ee loo yaqaan "Komi-san wa, Komyushō Desu" waxaana lagu wadaa in lagu sii daayo goob caan ah dhawaan. Maanta waxaan dulmaraynaa taariikhda la sii daayay ee Komi Ma Xiriirin karto, jilayaasha, halka aad ka daawan karto, iyo in ka badan. Hadaba hadii aad xiisaynayso Komi iyo sheekada ku xeeran dabeecadeeda ka dib fadhiiso oo naso inta aanu ku buuxinayno faahfaahinta. Dulmar - Komi ma wada xidhiidhi karo Anime Komi ma wada xidhiidhi karo Anime wuxuu leeyahay cinwaan qurux badan oo is sharraxaad ah daawadayaasha intooda badan. Waxay ku saabsan tahay […]
Demi waxay soo dhigtay Instagram-ka si ay ugu dhejiso qoraal kale oo cajiib ah oo Instagram ah taas oo ay ku muujinayso jirkeeda cajiibka ah dhammaan taageerayaasheeda Instagram. Demi waxay soo gelisaa qoraalo badan Instagram-ka halkaasoo ay ku dhowdahay inay qaawan tahay. Ku dhufo si aad u aragto dhammaan sawirada ay soo bandhigtay Arag qoraalkan Instagram Qoraal ay wadaagto Demi Rose (@demirose) Demi Mawby waxay leedahay mid ka mid ah profiles Instagram-ka ugu fiican ee jira, iyo sabab wanaagsan. Demi Mawby ayaa caan ku ah inay soo bandhigto muuqaalo ay ku dhowdahay inay qaawan tahay.
TikTok waxay caan ku tahay qoob ka ciyaarka isticmaalyaasheeda qaarkood. Qaar ka mid ah qoob-ka-cayaarahan waxay si fudud ugu dhici karaan fayraska. TikTok waxay noqotay mid caan ka ah Baraha Bulshada iyo App-ka fiidyaha dhawrkii sano ee la soo dhaafay - iyo ciyaaro badan oo TikTok kala duwan ayaa jira kuwa aad u caan ah sababtoo ah sida loo sameeyo. Markaa liiskan, waxaanu ku siinaynaa qaar ka mid ah qoob ka ciyaarka sexy TikTok ee ugu Wanaagsan. Cradle View si rasmi ah cradleview.net kuma xidhna TikTok (qayb ka mid ah qoob ka ciyaarka Byte) oo ma sheegato ku xidhidhaanshaha mid ka mid ah ilaha ama macluumaadka kor ku xusan.
Akane waa dabeecad aad u xun oo wax-is-daba marin ah oo ku jira Rabitaanka Anime Scums. Tani waxaynu ku aragnaa qaybihii ugu horeeyay marka iyada la soo bandhigo. Haddaba waa maxay sababta dabeecadeeda ay qayb weyn uga tahay bandhigga iyo sababta ay muhiim ugu tahay sheekada guud ee sheekada? Maqaalkan, si fudud ayaan uga hadli doonaa. Haddaba is deji inta aan si qoto dheer u eegno dhinacyada cabsida leh iyo astaamaha Akane Minigawa iyo sida ay doorka muhiimka ah ugu qaateen sheekada. Hordhaca Akane Habka loo soo bandhigay Akane ayaa iyada ka duwan jilayaasha kale sida […]